दशनामी युथ प्रदेश ४,का अध्यक्ष रुद्रले दिए राजीनामा – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ भाद्र १७ गते आईतवार १८:५० मा प्रकाशित 19
नेपाल दशनामी युथ प्रदेश नं. ४ का अध्यक्ष रुद्र गिरीले राजीनामा दिएका छन् । अध्यक्ष गिरीले केन्द्रका कारण आफ्नो प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना नभएको भन्दै भदौ १७ गते नेपाल दशनामी युथ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलाई राजीनामा दिएको ताण्डव न्यूजलाई बताए ।
‘मैले काम गर्नु पर्छ भनेर पटक पटक केन्द्रमा कुरा मात्र होइन पत्र समेत पेश गरे,’ उनले भने, ‘पाँच महिनासम्म पनि कुनै जवाफ आएन । पदमा बसेर मात्र हुँदैन काम पनि गर्नु पर्छ भन्ने सोचको मान्छे हुँ म । मलाई दशनामी युथ केन्द्रको काम मन परेन ।’
केन्द्रीय कार्यालयले सोच अनुसारको काम नगरेको भन्दै गिरीले गुनासो पोखे । ‘केन्द्रले पद दियो तर काम गर्ने वातावरण दिएन्,’ उनले भने, ‘मलाई मेरो समुदाय र नेपाल दशनामी समाजको हितको लागि काम गर्न पद नै चाहिँदैन । मैले शैक्षिक क्षेत्रमा समाजलाई सेवा गर्दै आएको छु र गर्ने छु ।’
नेपाल दशनामी युथ समाज प्रदेश नं. ४ का अध्यक्ष रुद्र गिरीले पेश गरेकाे राजीनामा पत्र
पोखरा उच्च अदालत : दुईन्यायधीश ईन, दुई आउट